IINDIDI ZEKHITSHI LOMGANGATHO WEKHITSHI (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zekhitshi loMgangatho weKhitshi (Isikhokelo soYilo)
Iindidi zekhitshi loMgangatho weKhitshi (Isikhokelo soYilo)
Kweli phepha sigubungela iintlobo zeetayile zekhitshi kubandakanya iindleko, iipateni kunye noyilo. Xa kuziwa ekukhetheni ithayile ekhitshini kukho ukhetho oluninzi. Kubalulekile ukuqwalasela izinto ezizinzileyo, iimfuno zolondolozo, iindleko kunye noyilo lokukhetha ezikhoyo ukwenza esona sigqibo. Apha siphula iintlobo ezahlukeneyo zeethayile zasekhitshini ukuze ufumane eyona ilungileyo ekhayeni lakho.
Ukukhetha uMgangatho wethayile ekhitshini
I-Ceramic Tile Umgangatho weKhitshi
I-Porcelain Umgangatho weeTayile zeThayile
Umgangatho weThayile yeKhitshi
Iitayile zeQuartz zeKhitshi loMgangatho
Iithayile zekhitshi loMgangatho weGranite
Iithayile zeMarble ekhitshini
I-Travertine Tile Umgangatho weKhitshi
Isilayidi sekhitshi kuMgangatho weeTayile
Ikhitshi loMgangatho weKhitshi
Umgangatho weKhitshini leBrick Brick
Iithayile zeTerracotta yoMgangatho weKhitshi
Iithayile zoMgangatho weKhitshi elinamathelayo
UMoses Ikhitshi kuMgangatho weeTayile (Iiceramic & Glass Tiles)
Iindleko kwiTile yoMgangatho weKhitshi
Uyilo lweethayile zoMgangatho weKhitshi
Iithayile ezinkulu zekhitshi
Ukudibanisa iithayile zekhitshi
Ikhitshi lomgangatho omnyama nomhlophe
Iipateni zethayile yomgangatho wasekhitshini
Eyona Tayile iphambili kuMgangatho weKhitshi
Zininzi izinto eziqwalaselwayo ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa kufikwa kwiithayile eziza kukhethwa njengomgangatho wekhitshi. Ezinye zezo ngqwalaselo zezi zilandelayo
Ukuzinza - Athini amandla kunye nobomi bezinto.
Umphezulu Nokuba umbandela ufuna ukupholishwa okanye ukutywinwa, kwaye yintoni eyenzayo kwinto leyo.
Ukufakwa - Kunzima kangakanani ukufakwa? Ngaba iya kuba kukufaka okanye ukuhlawula ikontrakta ukuze ugqibezele umsebenzi?
Iindleko -Ixabisa malini izinto eziphathekayo kwaye zifaka malini?
Apha ngezantsi siza kugubungela ezona ntlobo zidumileyo zethayile zasekhitshini zokwenza imigangatho kubandakanya ezinye zeenzuzo kunye neengozi zazo.
I-ceramic tile iphakathi kweethayile ezisetyenziswa rhoqo xa zisetyenziselwa ikhitshi phantsi. Amakhitshi ahlala enexabiso elinokubakho lokuchitheka, okwenza amanzi kunye neempawu ezinganyangekiyo zethayile zeceramic into ethandwayo. Sebenzisa iithayile eziglasiweyo yenye indlela yokufumana uxhathiso ngakumbi kumonakalo.
Ukongeza, iithayile zeceramic zinento elungileyo yokuzinza, eza kuluncedo xa izinto ezichithekileyo zisenzeka nje embizeni enzima okanye kwiglasi yeglasi. Ukuba unekhitshi eliphezulu lezithuthi, emva koko unokufuna ukubhekisa kuhlobo olusezantsi lwethayile enjengeceramic.
Ukuba uhlangabezana nomonakalo, ukusebenzisa ukhetho lwethayile kuluncedo kuba ungasoloko ubuyela umva uyokutshintsha ithayile enye eyaphukileyo endaweni yokuba ufumane umgangatho omtsha, okanye unyanzelwe ukuba uhlale nomgangatho oqhekekileyo.
Ukusuka kwindawo yokujonga ubuhle, iithayile zeceramic zikumgangatho ophezulu! Kukho isivumelwano esihle semibala kunye neepateni ezinokuthi zikhethwe ngeethayile zeceramic.
Iithayile ze-Porcelain zine-plethora yeempawu ezifanayo njengeetiles zeceramic ezichazwe apha ngasentla. Ukuqina kunye nokumelana nokudyobha kunye namanzi ngokukodwa, kodwa ezo mpawu zomelele ngakumbi kuneethayile zeceramic. Ukuze ithathelwe ingqalelo ithayile ye-porcelain kufuneka ibe ngaphantsi komyinge we-0.5 wokufunxwa kwamanzi.
Iithayile ze-Porcelain zihlala zisetyenziswa ekhitshini lokuthengisa, hayi indawo yokuhlala kuphela njengolunye ukhetho kwesi sizathu. Iithayile ze-porcelain ziyimveliso ephantsi kakhulu yolondolozo ngenxa yomgangatho ophezulu wemveliso uqobo.
Icala elisezantsi kuzo zombini iithayile zekheram apha ngasentla kunye neethayile ze-porcelain ezichazwe apha zezi ndawo zinzima, zinokubanda kwaye zibe nzima, zibenze bangakhululeki phantsi kweenyawo emva kokuma ithutyana. Kananjalo zinokuba nzima kakhulu -zenza ukuba zingasoloko zikwazi ukubekwa phezulu xa umda womthwalo ungonelanga.
Ndwendwela eli phepha ukuze ufunde ngakumbi malunga i-porcelain vs tile yodongwe .
Umgangatho weplanga ngumahluko omhle kuzo zonke iinketho zomgangatho wamatye ezikhoyo, ngelixa ugcina ukujonga kwendalo. Ezi iinkuni jonga iithayile zomgangatho zihlala zimiliswa zahluke kancinane kunezinye, kwaye zinika ngaphezulu kweplanga. Ezi tile zomthi zihlala zenziwe ngomthi wobunjineli, ngokuchasene nomthi onzima wendalo.
Oku kunokwenza umgangatho odadayo ekulula ukuwufaka nokususa ukuba kukho imfuneko yoko. Ngelishwa ezi tile zomgangatho weplanga zisengozini yokuchaphazeleka njengezinye iindlela ngenxa yokongezwa koguquko. Ukuba bhetyebhetye kweethayile kuvumela ukutyibilika nokwanda kunye nekhontrakthi ngokukhululekileyo ngamaqondo obushushu kunye nokufuma.
Iithayile zeQuartz zintle kwaye zifunwa emva komgangatho. Oku kunika imvakalelo yangoku kwisithuba xa ezi ntlobo zethayile zisetyenziswa ekhitshini. I-Quartz yinto engeyiyo eyomileyo eyenza ukuba imelane namanzi kunye neentsholongwane.
Iithayile zeQuartz zikwicala elomeleleyo; aziqheleki ukwenza i-chip, ukukrwela okanye ukuqhekeka. Ukongeza, iithayile ze-quartz zikwicandelo lamaxabiso asengqiqweni ngakumbi kwikhathalogu.
Ngelishwa ngenxa yomphezulu ogudileyo, ezi tile zinokutyibilika xa zimanzi.
Umgangatho weethayile zeGranite yinto eyaziwayo ephezulu yokuphela. Iithayile zeGranite zinikezelwa kwimibala emininzi kunye nezitayile, ngokuziva kwendalo kubo, ezi tile zinokuconjululwa ukongeza ubuncinci bokukhanya kunye nokukhanya kwiithayile.
Imigangatho yethayile yeGranite yinto eyomeleleyo lelinye lawona matye anzima anokusetyenziselwa ukutyibilika - oku kuthetha ukuba iithayile zibambe kakuhle kwiimpembelelo kwaye zixhathise izinto ezininzi ezinokuwaphula.
Ukongeza, iithayile zeGranite ziyamelana nebala. Ngelishwa iithayile zegranite zinokutyibilika xa zimanzi ezivela kwipolishi efakiweyo kwaye zikwicala elibizayo kuluhlu lwamaxabiso.
Iithayile zeMarble zizinto ezintle, eziphezulu. Iithayile zeMarble zikhwaza ubunewunewu kunye nesitayile, ngelixa zisisixhobo esisebenzayo. Imarble inokufumaneka kwiindidi ezahlukeneyo zemibala eyahlukeneyo, kunye namanqanaba okucoca ahlukeneyo.
Ngelixa iithayile zemabhile zisebenza, azigqwesi kwimimandla yezinye iithayile ezikhankanyiweyo. Iithayile zemarble zisengozini yokwenzakaliswa kukrwela kunye namabala, kodwa inokutywinwa ngamaxesha athile ukunceda koku.
izithembiso zomtshato kuye
Ngethamsanqa, ukutyibilika kungangeni manzi- kodwa la manqanaba akhankanywe apha ngasentla angenza ukuba ukutyibilika kube mtyibilizi xa umanzi. Ngaphandle kwaleyo, enye into esezantsi lixabiso eliphezulu leethayile zemabhile kunye nexabiso lentengo kwimirhumo yokufaka.
I-travertine flooring yinto ekhethiweyo ekhitshini ngakumbi kwiindawo apho ilitye lifumaneka khona ngokubanzi. Esona sibonelelo sikhulu semveliso yinto yayo eco-friendly. Iithayile zetravertine zinokuphinda zisebenze kwakhona, zitshintshe ibe yimo yazo yonke indalo.
Ukongeza, iTravertine yimveliso enokuthi ihlale ixesha lokuphila. Ngelixa inokubanakho ukuhlala ubomi bonke, ukuba ukhathalelo olufanelekileyo kunye nolondolozo alugciniwe, le projekthi ayizukumelana novavanyo lwamaxesha njengoko inakho. Oku kufuna ukutywinwa rhoqo ukuyinika isithintelo samanzi esingenayo imveliso yendalo.
Ngenxa yobunjani bendalo bezinto eziphathekayo, iyancipha imibala iTravertine ifumaneka kuyo, kodwa iitoni zomhlaba zifumaneka kuyo ziyamangalisa, kwaye zongeza imeko yomhlaba esemhlabeni.
Iithayile zesilayati lolunye uhlobo lokutsala ngamehlo kunye nenketho yendalo entle yomgangatho ekhitshini. Isilayiti sahlukile kwezinye iithayile ezinokucingelwa, kwanezinye izingcezu zesileyiti.
Ayisiyiyo kuphela i-aesthetics yeethayile zesileyiti ezimangalisayo, ukuzinza kwayo nako akunakulinganiswa. I-slate flooring iyamelana nokuqhekeka kunye nokuqhekeka.
Iithayile zesilayiti nazo zixhathisa kakhulu emanzini nakwibala, kodwa kuyacetyiswa ukuba zitywinwe rhoqo ukugcina imeko ihambile kunye nokunika ixesha elide elinokwenzeka kwiithayile. Elona cala lililo elisezantsi kwiithayile zesileyiti lixabiso eliphezulu kakhulu ngenxa yomgangatho omangalisayo kunye nokubonakala kweethayile.
Iithayile zekhonkrithi zekhonkrithi lukhetho olukhethekileyo xa kufikwa kumgangatho wasekhitshini. Ukhetho luhamba kakuhle nekhitshi yesitayile esincinci. Le mveliso inokuza phantse kuwo nawuphi na umbala kunye noyilo onokucinga ngalo.
Ngelishwa ikhonkrithi yinto enokungena - oko kuthetha ukuba kufuneka itywinwe rhoqo. Nokuba ukutywinwa kwemathiriyeli kusenokwenzeka ukuba kungabakho monakalo emanzini, imikrwelo okanye amabala.
Isitena lukhetho oluqinileyo nolomeleleyo kwithayile ekhitshini. Iitena zezitena ziphantsi kulondolozo kwaye kunzima ukuzonakalisa, ezibonelela ngezinto eziphathekayo ixesha elide lokuphila. Ngelishwa, izitena ayingamanzi okanye ayanyangeki ngaphandle kwetywina.
Iitena zezitena kufuneka ziphinde zitywinwe kube kanye ngonyaka okanye kwiinyanga ezintandathu zonke ukuba kukho ukugcwala kwabantu abaninzi kwisithuba eso. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zemibala kunye neepateni onokukhetha kuzo xa kufikwa kwiitena zezitena.
I-tile yeTerracotta lolunye lweendidi zeetayile ezindala, ezenziwe ngodongwe. Udongwe lunika i-terracotta ithoni ebomvu ebomvu. Ngelishwa udongwe lweTerracotta lubi kakhulu kwaye kufuneka lucwecwe ukuze lusetyenziswe njengeethayile kwiimeko ezininzi.
I-glazing inika iithayile ukukhanya okuhle kubo, eyibhonasi eyongeziweyo. Kukho ubuninzi obahlukeneyo beethayile zodongwe ezinokuthi zithatyathwe kuloo nto zichonga ukuhlala kwayo. Ukuphakama koxinano lwethayile yodongwe lwe-terracotta, kokukhona kuzinzileyo ukuzinza.
Ngokwithiyori zonke iithayile zomgangatho wasekhitshini zifuna ukunamathela ukuze zinamathele kumgangatho ongezantsi womgangatho, kodwa kule meko sithetha into eyahlukileyo. Uhlobo lwe-Adhesive lweethayile zokwenza izinto yinto enokuyenza ngokwakho enokuthi ibe ngumgcini mali xa wenziwe ngokuchanekileyo.
Olu hlobo lweethayile lunokucholwa kwivenkile yokuphucula ikhaya kwaye lunokuza kwizinto ezahlukeneyo ezichazwe kulo lonke eli nqaku. Umahluko ophambili kunye nenqaku leethayile ezinamathelayo kukuba unokucoca umva wethayile njengesitikha kwaye ubambelele kwisiseko somgangatho.
Oku akukhuthazwa ukuba ube ngumqali, kodwa uqhelisele ukwenza ngokwakho (okanye i-newbie enomyalelo olungileyo ngokwenyani kulandela izakhono) kufanelekile ukuba ungankqonkqoza olu hlobo lweprojekthi.
Ngeentlobo ezahlukeneyo zamatye kunye neetayile ezinemibala yendalo, ngumoya womoya omtsha ukujonga iithayile zomgangatho we-mosaic. Ezi tile zinokuza ngayo yonke imibala, iimilo kunye nobukhulu, ezenza iipateni zikhawulelwe kwingcinga yakho kuphela.
Njengoko iithayile zomgangatho weceramic / ze-porcelain zikhankanyiwe ngaphambili ziyaqina, ziyafikeleleka kwaye zibonelela ngokulondolozwa okuphantsi.
Iithayile zemibala yeglasi inezinga eliphezulu lokucoceka, njengenye yezona zinto zicocekileyo kwaye kulula ukuzicoca iimveliso ezikhoyo.
Ngelishwa iithayile zeglasi kaMosisi zichaphazeleka kukrwela ixesha, kwaye ziliphupha elibi lokufaka. Ngethamsanqa, ithayile ekrwitshiweyo ithathelwa indawo ngokulula, kwaye kulula ukuhlawula omnye umntu ukuba ayifakele ukuze uzigcinele intloko.
Iithayile zeCeramic -Iithayile zeCeramic ziphakathi kwexabiso lendlela elixabisa malunga ne- $ 1 ukuya kwi- $ 7 ngeenyawo zenyawo nganye ngokuxhomekeke kumgangatho kwaye kungabandakanyi ukufakwa.
I-Porcelain tile -Iithayile ze-Porcelain zikwicala eliphezulu lamaxabiso. Iindleko zokufaka nazo ziphezulu njengoko kuyiprojekthi enzima. Iindleko zinokubakho ukusuka kwi- $ 3 ukuya kwi- $ 10 ngonyawo wesikwere ngokuxhomekeke kwiimpawu kunye noyilo.
Iithayile zomthi -Iithayile zomthi ziphakathi kuluhlu lwamaxabiso endlela. Oku kungahluka naphi na ukusuka kwi-1 ukuya kwi-6 yeedola kwisikwere kuxhomekeke kumgangatho weenkuni ezikhethiweyo. Iinjini zobunjineli xa kuthelekiswa neenkuni zendalo ziya kudlala indima enkulu kwixabiso.
Iithayile zeQuartz -Iithayile zeQuartz ziphakathi kuluhlu lwamaxabiso endlela. Oku kungasebenza malunga needola ezi-3 ukuya kwezi-5 ngonyawo wesikwere ongafakwanga.
Iithayile zeGranite -Iithayile zeGranite zikwicala elingasentla eliphezulu kuluhlu lwamaxabiso. Oku kuya kukubeka malunga ne- $ 5 ukuya kwi-10 ngeenyawo zenyawo zethayile yegranite.
Iithayile zokuhamba - Iithayile zethrafikhi ziphakathi kuluhlu lwamaxabiso endlela. Oku kubeka ithegi yexabiso malunga ne- $ 3 ukuya kwi-5 yeenyawo ngonyawo wesikwere ngaphandle kofakelo.
Iithayile zeMarble -Iithayile zeMarble ziphezulu kuluhlu lwamaxabiso. Le mveliso inokukuqhubela malunga ne-6 ukuya kwi-12 yeedola unyawo olungafakwanga.
Isileyiti iithayile Iithayile zesilayidi zikwindawo ephezulu yexabiso. Iithayile zesileyiti zinokubiza naphi na ukusuka kwi- $ 5 ukuya kwi-15 yeenyawo zenyawo nganye ngaphandle kofakelo.
Iithayile eziphathekayo -Iithayile zekhonkrithi ziphakathi ezantsi kumaxabiso endlela. Oku kubeka ixabiso lentengo malunga ne- $ 2 ukuya kwi-4 yeenyawo zenyawo ngaphandle kofakelo.
Iithayile zezitena -Iitayile zeBrick zikumgangatho ophezulu kuluhlu lwamaxabiso endlela. Oku kunokuba malunga ne- $ 6 ukuya kwi-10 yeedola kwisikwere sonyawo ukujula kubukhulu, umbala kunye nomgangatho.
Iithayile zeTerracotta -Iithayile zeTerracotta ziphakathi kuluhlu lwamaxabiso endlela. Kwi-tile ye-terracotta esitywinwe ngaphambili ujonge indleko yokuqala yeedola ezi-3 ukuya kwezi-7 ngonyawo wesikwere ongafakwanga nesidingo sokuphinda senziwe malunga ne- $ 2 ngenyawo lesikwere rhoqo ngonyaka okanye ngaphantsi.
Iithayile ezinamathelayo -Iithayile zokubambelela zisezantsi kwinqanaba lamaxabiso. Oku kuhlala kubiza malunga ne- $ 0.50 ukuya kwi- $ 2 ukuba ujonge kwi-peel esemgangathweni kwaye unamathele iithayile. Nantoni na enomdla kunoko inokuphakamisa ixabiso kakhulu.
Iithayile zikaMoses -Iithayile zikaMoses ziphezulu ukuya phakathi kuluhlu lwamaxabiso endlela. Ixabiso lingaqala ukusuka kwi-3 ukuya kwi-9 yeedola kwisikwere kuxhomekeke kuyilo.
Kwiindleko zokufakela kunokubakho ukongezwa kwe- $ 4 ukuya kwi-30 yeedola ngeenyawo zecala kuyo nayiphi na okanye zonke ezi zinto zithengwayo xa ukhetha ufakelo lobuchule.
Ngokusekwe kubunkunkqele, ubunzima kunye noyilo lomgangatho onokutshintsha ixabiso ngqo. Abafowunelwa banokunika isicatshulwa ngokusekwe kuyilo. Ezinye iindleko ezongezelelweyo xa ukhetha ukufakwa kobungcali kunokuba ziiglu, isixhobo kunye nezinye izinto ezinxulumene nokufakwa ezinokufuneka kwiprojekthi.
Kukho itoni yokhetho olwahlukileyo kwiithayile zekhitshi xa kuziwa kuyilo. Oku kunxulumene ikakhulu kubungakanani, imilo kunye nendlela iithayile ezivalelwe ngayo kunye. Olunye loyilo oludumileyo lubhalwe apha ngezantsi.
Ngokusebenzisa iithayile ezinkulu kuyilo lomgangatho wekhitshi unokwenza umahluko omkhulu ngeendlela ezininzi. Kwezinye iithayile, nganye ihlukile kwaye iithayile ezinkulu zinika ithayile indawo eyoneleyo yokubonisa ubuhle ngelixa ezinye ecaleni kwayo zinokwahluka kancinci okanye nangombala okanye iphethini.
Oku kunika inkangeleko eyahlukileyo nenobunkunkqele. Ukongeza, iithayile ezinkulu zinokuthelekisa nakweyiphi na i-mosaic backsplashes okanye uyilo ekhitshini ukubonisa iintlobo ezahlukeneyo zethayile ezinokusetyenziswa kuyilo.
Ukudibanisa iithayile zekhitshi zisetyenziselwa ukusebenza kunye nenjongo yobuhle yoyilo. Olu luyilo lwethayile lwenza ukuba kungabikho sidingo sakubakho ekuncamatheni kwenziwa kwiithayile.
Oku kunokunika ukucoceka, ukujonga okuncinci ngakumbi kumgangatho jikelele. Xa kufikwa ekusebenzeni kwezi tile, iithayile ezingena ngaphakathi zenza umgangatho odadayo ekulula kakhulu ukuwufaka kunye nokuwufaka, kuba awufuni kuthotyelwa kwi-subfloor.
Umgangatho omnyama kunye nomhlophe wethayile uyilo olungapheliyo. Uyilo olunesibindi kunye noludala, kwaye lunokubandakanya ezinye iindlela ezininzi zoyilo ezisekwe kwiipateni kunye nobungakanani beetayile.
Imibala emibini iyahluka kwaye inike ezona zinto zichaseneyo kumbala ngamnye. Ngeetayile ezimnyama ezisebenza ukuvula nokupholisa indawo, ezimhlophe ziyancipha kwaye zifudumeze igumbi ngaxeshanye, zizisa imvisiswano kwindawo.
Ukwenza ubuchule ngokwenyani, ukukhetha iipateni ezahlukeneyo ukubeka iithayile ezinqwenelekayo kunokwenza indawo eyahlukileyo nenobunkunkqele.
Ezinye iingcebiso zepateni ezithandwayo zokujonga zidweliswe apha ngezantsi. Ukubona igalari yethu epheleleyo ye iipateni zethayile kunye nobeko ndwendwela eli phepha.
Ipateni yeherringbone yipateni emise okwe-v efana ne-zigzag eyaphukileyo xa idityanisiwe. Ikwafana nomqolo (wentlanzi) wamathambo, kulapho igama livela khona.
Iithayile zeHexagon yipateni eyaziwayo ebandakanya imilo emacaleni emithandathu yeheksagoni.
Ukujonga okucocekileyo, okuncinci ukujonga ipateni ebekiweyo kubeka iithayile nganye ngaphezulu kwenye kwaye ecaleni kwelinye zenze imigca ethe ngqo.
Ipateni ye-pinwheel ibandakanya ubungakanani obukhulu kwirayile enye incinci kakhulu kunenye. Ithayile encinci yindawo kwaye emva koko ezinkulu zisasazwe zijikeleze yona ukuze zifane ne-pinwheel, kwaye oku kuyaphinda ukwenza ipateni.
Iphethini engahleliwe ibandakanya ukhetho olungenamkhethe lweemilo kunye nobukhulu kwaye ke zibekwa nje manqaphanqapha de kugcwaliswe indawo yonke.
Iphethini ye-offset inokubhekiswa kuyo njengephethini yezitena okanye ipateni yebhondi esebenzayo. Oku kubeka iithayile zekona kunye neelayidi ezingezantsi komda ophakathi. Oku kusetyenziselwa amandla.
I-1/3 iseti ngumqondo ofanayo nokuseta okuqhelekileyo ngaphandle kokuya embindini wethayile, iya kwi-1/3 yendlela, isenza uyilo lube nzima ngakumbi.
Ipateni yethayile yaseVersailles, ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yipateni yesiFrentshi, isebenzisa isixa esimiselweyo seethayile kubungakanani 8 nge 8, 8 nge 16, 16 nge 16, kunye 16 nge 24 ngokusekwe kwinani lesikwere egqunyiweyo.
Ibhaskithi yokuluka iya kufana nepateni ebekiweyo ngaphandle kwezinye zeethayile (oku kwenziwa kusetyenziswa iziqwenga zoxande) ziya kuguqulwa zibe ngama-90 degrees. Oku kwenziwa ukuba kufane nomzekelo olukiweyo kwiithayile.
Funda ngakumbi malunga iimilo ezahlukeneyo zethayile Apha.
Xa kuziwa ekuthatheni isigqibo sokuba yeyiphi imigangatho yeyona ilungileyo, sisigqibo esinzima. Umgangatho olungileyo unokwahluka kuwo wonke umntu, kwaye uhlahlo-lwabiwo mali luza kudlala indima enkulu kukhetho nokuba yintoni.
Owona tayile uphantsi womgangatho wasekhitshini xa kuziwa kuzinzo, ukugcinwa kunye nexabiso yitera ye-porcelain. Ifunwa ngokubanzi ekhitshini kwaye ubuninzi bemibala kunye noyilo kuthetha ukuba inokusebenza phantse nasiphi na isitayile sasekhitshini.
Njengokuzikhethela kwamntu kuya kufuneka ndibeke isileyiti phezulu kuluhlu, xa uhlahlo-lwabiwo mali kunye noyilo ngokubanzi ingezizo izinto. Iithayile zinobuhle, ukuhlala ixesha elide, ukumelana namanzi kunye namabala, ukungafani, kunye nexesha elide lokuphila elinokuthi likhule kuphela ngononophelo olufanelekileyo.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga iphepha lethu Ikhitshi elingaphantsi kwethayile imibono yokubuyela umva .
ungayifumana ntoni indoda ngekrisimesi
Umama kunye nonyana badanisa emtshatweni
isicakakazi sebhokisi yesindululo sembeko
ibhedi eyakhiwe eludongeni
Ingcinga yesikhumbuzo somtshato wama-60